Imaaraatku Soomaaliya kuma laha maalgashiyo oo ugu cagajugleeyo joojintooda. Ma jirin kuwa soo socday oo uu ka noqdo. Sidoo kale, ma jirto lacag iyo dhaqaale uu si kale ugu taageero. Halka arrin oo uu isku hallaynayay waa ciidamada uu tababari jiray tiina dowalada ayaa soo afjartay. Waxaa la mid ah saaxiibkiis Sacuudi oo aan haysan wax u qasbo Soomaaliya.
Jidka uu isticmaali jiray Sacuudigu wuxuu ahaa wadaadda uu jibka soo galiyay. Kuwiina hadda isagaa iska xiray oo aannan doonayn inuu wax ku darsado. Sidaas darteed Imaaraad dhimaca dhaqaalaha awood kuma lahan marki la joogo Soomaaliya.
Sadex, Imaaraad waxaa loo nacay si ka daran Itoobiya. Taasi waxay keentay in maamul gobaleedyadi iyo kuwo ku qaraaban lahaa si kale ay xamili waayaan cadaadiska bulshada. Ninki lagu tuhumo inuu Imaaraad xariir la leeyahay waxaa loo arkaa khaa'inul wadan.